Isaziso Esisemthethweni Somthetho ▷➡️ eltecnoanalista
Isaziso Sezomthetho kanye nemibandela yokusebenzisa
Idokhumenti ibuyekezwe ku-25 / 03 / 2018
Uma ufikile lapha, ukuthi unendaba negumbi elingemuva lale webhusayithi nemibandela engikhetha ukusebenzisana nawe futhi lokho kuyizindaba ezinhle kimi, njengoba ngibhekele le webhusayithi.
Isizathu salo mbhalo ukuchaza kabanzi ukusebenza kwale webhusayithi futhi kukunikeze lonke imininingwane ehlobene nomuntu ophethe nenhloso yokuqukethwe okufakiwe kuyo.
Idatha yakho kanye nobumfihlo bakho kubaluleke kakhulu kule webhusayithi yingakho ngincoma ukuthi nayo uyifunde Inqubomgomo Yemfihlo.
Into yokuqala okufanele uyenze wazi ukuthi ngubani obhekele le webhusayithi. Ngokuhambisana nomthetho we-Law 34/2002, kaJulayi 11, ngezinsizakalo zomphakathi wolwazi kanye nokuhweba nge-elekthronikhi, kukwazisa:
• Igama lebhizinisi ngu: Pedro Huertas
• Ihhovisi elibhalisiwe liku-C/ Blas de Infante -18001 – (Granada)
• Umsebenzi wezenhlalo ngu: I-Web ekhethekile ezinkambisweni eziningi zokumaketha ku-inthanethi.
Inhloso yale webhusayithi
• Nikeza okuqukethwe okuhlobene nomsebenzi we-Online Marketing.
• Phatha uhlu lwababhalisile bebhulogi namazwana aphakathi.
• Phatha okuqukethwe nokuphawula kwezinsizakalo ezinikezwayo.
• Phatha inethiwekhi yezinhlangano ezihambisana nazo.
• Izinsiza zemakethe nezakho.
Uma usebenzisa iwebhusayithi ye-eltecnoanalista.com, Umsebenzisi uzibophezela ukuthi angeke enze noma yikuphi ukuziphatha okungalimaza isithombe, izithakazelo namalungelo e-eltecnoanalista.com noma abantu besithathu noma okungase kulimaze, kukhubaze noma kulayishe ngokweqile iwebhusayithi ye-eltecnoanalista. com noma lokho kuvimbela, nganoma iyiphi indlela, ukusetshenziswa okuvamile kwewebhusayithi.
I-eltecnoanalista.com isebenzisa izindlela zokuphepha ezanele ukuthola ubukhona bamagciwane. Kodwa-ke, Umsebenzisi kufanele aqaphele ukuthi izinyathelo zokuphepha zezinhlelo zamakhompiyutha ku-inthanethi azithembekile ngokuphelele nokuthi, ngakho-ke, i-eltecnoanalista.com ayikwazi ukuqinisekisa ukungabikho kwamagciwane noma ezinye izakhi ezingadala izinguquko ezinhlelweni zamakhompiyutha. ) yoMsebenzisi noma emibhalweni yabo ye-elekthronikhi namafayela aqukethwe kuwo.
Kunoma ikuphi, kuyakwenqatshelwa ukuthi abakwa-USERS (bakwazi ukususa okuqukethwe kanye namazwana abona kufanelekile) ukuziphatha okubandakanya:
• Gcina, shicilela futhi/noma udlulise idatha, imibhalo, izithombe, amafayela, izixhumanisi, isofthiwe noma okunye okuqukethwe okungabazisayo ngokuvumelana nezinhlinzeko zomthetho ezisebenzayo, noma lokho ngokuya ngokulinganisa kwe-eltecnoanalista.com ngokungekho emthethweni, ubudlova, ukusongela, ehlambalazayo, ehlambalazayo, enenhlamba, enenhlamba, ecwasa ngokwebala, ezondayo noma engamukeleki noma engekho emthethweni noma engabangela ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo, ikakhulukazi izithombe zocansi.
Njengomsebenzisi, uyaziswa ukuthi ukufinyelela kule webhusayithi akusho, nganoma iyiphi indlela, ukuqala kobudlelwano bezentengiselwano noPedro Huertas. Ngale ndlela, umsebenzisi uvuma ukusebenzisa iwebhusayithi, izinsizakalo zayo kanye nokuqukethwe ngaphandle kokwephula umthetho. .ngokunamandla, ngokwethembeka nokuhleleka komphakathi. Ukusetshenziswa kwewebhusayithi ngezinjongo ezingekho emthethweni noma eziyingozi, noma lokho, nganoma iyiphi indlela, kungabangela umonakalo noma kuvimbele ukusebenza okuvamile kwewebhusayithi akuvunyelwe.
Ngokuphathelene nokuqukethwe kule webhusayithi, akuvunyelwe:
• Ukukhiqiza kabusha, ukusabalalisa noma ukuguqula, kuphelele noma okuyingxenye, ngaphandle uma kugunyazwe abanikazi abanelungelo;
• Noma yikuphi ukwephulwa kwamalungelo omhlinzeki noma kwabanikazi abasemthethweni;
• Ukusetshenziswa kwayo ngezinjongo zokuthengisa noma zokukhangisa.
U-Pedro Huertas uqinisekisa ukugcinwa kuyimfihlo kwedatha yomuntu siqu ehlinzekwa ngaba-USERS kanye nokuphathwa kwabo ngokuvumelana nomthetho wamanje wokuvikela idatha yomuntu siqu, ngemva kokuthatha amazinga okuphepha okuvikela idatha yomuntu siqu edingeka ngokusemthethweni.
U-Pedro Huertas uzibophezela ukusebenzisa idatha efakwe efayeleni elithi "WEB USERS AND SUBSCRIBERS", ukuhlonipha ukugcinwa kuyimfihlo kwayo futhi ukuyisebenzise ngokuvumelana nenjongo yayo, kanye nokuthobela isibopho sayo sokuyilondoloza nokujwayela zonke izinyathelo zokugwema ukushintshwa. , ukulahlekelwa, ukwelashwa noma ukufinyelela okungagunyaziwe, ngokuhambisana nezinhlinzeko ze-Royal Decree 1720/2007 yango-December 21, egunyaza Imithethonqubo yokuthuthukiswa kwe-Organic Law 15/1999 yango-December 13, Ukuvikelwa Kwedatha Yomuntu Siqu.
Le webhusayithi isebenzisa izindlela ezihlukile zokubamba imininingwane yabantu ezibalulwe ku Inqubomgomo Yemfihlo futhi lapho ukusetshenziswa nezinhloso kubikwa ngokuningiliziwe. Le webhusayithi ihlala idinga imvume yangaphambilini yabasebenzisi ukucubungula imininingwane yabo ngezinjongo ezikhonjisiwe.
Umsebenzisi angasebenzisa, ngokuphathelene nedatha eqoqiwe, amalungelo aqashelwa ku-Organic Law 15/1999, okufinyelela, ukulungisa noma ukukhansela idatha nokuphikiswa. Ukuze asebenzise la malungelo, umsebenzisi kufanele enze isicelo esibhaliwe nesisayiniwe abangasithumela, kanye nekhophi ye-DNI yabo noma umazisi olinganayo, ekhelini leposi likaPedro Huertas (okungukuthi, C/ Blas de Infante -18001 - (Granada) ) noma nge-imeyili, enamathisela ikhophi ye-DNI kokuthi: info(at)eltecnoanalista.com. Ngaphambi kwezinsuku eziyi-10, isicelo sizophendulwa ukuze kuqinisekiswe ukusetshenziswa kwelungelo ocele ukulisebenzisa.
U-Pedro Huertas ubika ukuthi kukhona amafomu ezicelo atholakalayo kubasebenzisi namakhasimende.
Umsebenzisi angenza izimangalo ngokucela ifomu lakhe lesicelo noma ngokuthumela i-imeyili ku-info(at)eltecnoanalista.com ebonisa amagama nezibongo zabo, isevisi noma umkhiqizo othengiwe futhi esho izizathu zesimangalo sakhe.
Ungakwazi futhi ukuthumela isimangalo sakho ngeposi eqondiswe ku: Pedro Huertas, C/ Blas de Infante -18001 – (Granada) usebenzisa, uma uthanda, ifomu lesimangalo elilandelayo:
Ukunaka kuka: Pedro Huertas
• Igama lomsebenzisi:
• Ikheli lomsebenzisi:
• Isiginesha yomsebenzisi (kuphela uma yethulwe ephepheni):
• Isizathu sesicelo:
Ngalezi Zimo Ezivamile, awekho amalungelo empahla yengqondo noma yezimboni adluliselwa phezu kwewebhusayithi eltecnoanalista.com, impahla yengqondo eyingxenye kaPedro Huertas, futhi Umsebenzisi unqatshelwe ngokusobala ekukhiqizeni kabusha, ukuguqula, ukusabalalisa, ukuxhumana esidlangalaleni, ukwenza kutholakale. emphakathini, ukukhipha, ukusebenzisa kabusha, ukudlulisela phambili noma ukusetshenziswa kwanoma yiluphi uhlobo, nganoma iyiphi indlela noma inqubo, yanoma iyiphi yazo, ngaphandle kwalapho kuvunyelwe ngokomthetho noma kugunyazwe umnikazi wamalungelo ahambisanayo.
Umsebenzisi uyazi futhi wamukela ukuthi yonke iwebhusayithi, equkethe ngaphandle kokukhawulela umbhalo, isoftware, okuqukethwe (kufaka phakathi ukwakheka, ukukhetha, ukuhlelwa kanye nokwethulwa okufanayo) izithombe, izinto ezibonakalayo kanye nezindlela zokupheka, zivikelwe uphawu lwentengiso, amalungelo okushicilela kanye namanye amalungelo asemthethweni abhalisiwe, ngokuya ngezivumelwano zamazwe aphesheya lapho iSpain iyiqembu namanye amalungelo epropathi nemithetho yeSpain.
Esimeni lapho umsebenzisi noma inkampani yangaphandle ibheka ukuthi kube khona ukwephulwa kwamalungelo abo empahla yengqondo esemthethweni ngenxa yokwethulwa kokuqukethwe okuthile kuwebhu, kufanele azise u-Pedro Huertas ngalesi simo, abonise:
• Imininingwane yomuntu ophathelene nalowo ophethe amalungelo okusolwa ukuthi wephulwe, noma akhombise isethulo enza ngaso icala uma isimangalo sivezwa umuntu wesithathu ngaphandle kwalowo othintekayo.
Khombisa okuqukethwe okuvikelwe amalungelo obunikazi bempahla nendawo akuyo kwiWebhu, ukuqinisekiswa kwamalungelo empahla yempahla ekhonjisiwe nesimemezelo esikhanyayo lapho iqembu elinentshisekelo libhekele ubuqiniso bolwazi olunikezwe kwisaziso.
U-Pedro Huertas wenqaba noma yimuphi umthwalo ophathelene nolwazi olutholakala ngaphandle kwale webhusayithi, njengoba umsebenzi wezixhumanisi ezivelayo uwukwazisa kuphela Umsebenzisi mayelana nokuba khona kweminye imithombo yolwazi ngesihloko esithile. U-Pedro Huertas ukhululiwe kuwo wonke umthwalo wemfanelo wokusebenza ngendlela efanele kwalezo zixhumanisi, umphumela otholakala ngezixhumanisi ezishiwo, ubuqiniso kanye nokuba semthethweni kokuqukethwe noma ulwazi olungafinyeleleka, kanye nomonakalo umsebenzisi angawuthola. ulwazi olutholakala kuwebhusayithi exhunyiwe.
U-Pedro Huertas akanikezi noma yisiphi isiqinisekiso futhi akanasibopho, kunoma yikuphi, ngomonakalo wanoma yiluphi uhlobo olungabangelwa:
• Ukuntuleka kokutholakala, ukugcinwa kanye nokusebenza okusebenzayo kwewebhusayithi noma izinsizakalo zayo nokuqukethwe;
• Ukuba khona kwamagciwane, izinhlelo ezinonya noma eziyingozi kokuqukethwe;
• Okungekho emthethweni, ukunganaki, ukukhwabanisa noma okuphambene nalesi Saziso Sezomthetho;
• Ukuntuleka kokuba semthethweni, ikhwalithi, ukuthembeka, usizo nokutholakala kwezinsizakalo ezinikezwe abantu besithathu nokwenziwe kwabasebenzisi kwiwebhusayithi.
Umhlinzeki akabi nesibopho ngaphansi kwanoma yiziphi izimo kumonakalo ongavela ngokusetshenziswa okungekho emthethweni noma okungafanele kwale webhusayithi.
Ngokuvamile, ubudlelwano phakathi kwe-eltecnoanalista.com kanye Nabasebenzisi bezinsizakalo zayo ze-telematic, abakhona kule webhusayithi, bungaphansi kwemithetho negunya leSpanishi kanye Nezinkantolo ZaseGranada.
Esimeni lapho noma yimuphi Umsebenzisi eba nemibuzo mayelana nalesi saziso somthetho nanoma yikuphi ukuphawula kuwebhusayithi ye-eltecnoanalista.com, angaxhumana ne-info(at)eltecnoanalista.com
I-eltecnoanalista.com inelungelo lokushintsha, nganoma yisiphi isikhathi futhi ngaphandle kwesaziso sangaphambili, ukwethulwa nokucushwa kwewebhusayithi ye-eltecnoanalista.com kanye nalesi saziso somthetho.